बर्ष २०७४ फर्केर हेर्दा - १० बिवाह, ५ डिभोर्स, नयाँ हिरोइनहरु (भिडियो)
Topic: बर्ष २०७४ फर्केर हेर्दा - १० बिवाह, ५ डिभोर्स, नयाँ हिरोइनहरु (भिडियो)
Author Topic: बर्ष २०७४ फर्केर हेर्दा - १० बिवाह, ५ डिभोर्स, नयाँ हिरोइनहरु (भिडियो) (Read 3080 times)
« on: April 11, 2018, 11:09:19 AM »
जसको सम्बन्ध बिच्छेद भयो
हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेल र मिना ढकालको सम्बन्ध बिच्छेद यो बर्षकको सर्वाधिक चर्चित बिषय बन्यो । २० वर्षका छोरा र १३ वर्षकी छोरीका आमा बाबु ले बिवाह गरेको २२ वर्ष २२ पछि डिभोर्स गरेका हुन । यो दम्पतिले डिभोर्स पछि सम्पति र छोरा छोऱि पनि बाँडेका छन - अहिले छोरा बाबु मनोजसँग बस्छन भने छोरी आमा मिनासँग।
अभिनेत्री रिमा विश्वकर्माको सम्बन्ध पनि बिवाह भएको दुई वर्ष नपुग्दै टुंगिएको छ । सुन्दरि रिमा विवाह पछि नेपालमा नै ब्यस्त रहिन भने श्रिमान रोवर्ट विश्वकर्मा बेलायतमा बस्थे। यसरि लामो दुरिको सम्बन्ध छोटो समयमा नै टुटनुमा रिमा नेपाल आईडलमा व्यस्त हुनु र लण्डनमा भएका श्रीमान् रोबर्ट अर्कै युवतिको चक्करमा फसेको कारणले टुटेको बताइन्छ ।
गायिका मिलन अमात्य र उनका श्रीमान् मेन्सन अमात्यले पनि २०७४ सालमा नै सम्बन्ध बिच्छेद गरे । करिब ६ वर्ष लामो वैवाहिक सम्बन्ध टुटनुमा मिलन र गायक दीपक लिम्बु बिचको सम्बन्ध कारक भएको चर्चा चले पनि मिलन र दीपक दुवैले यो हल्लालाइ झुठो भनेका छन् ।
यसै बर्ष अभिनेत्रि अरुणिमा लम्सालले पनि सम्बन्ध बिच्छेद गरिन। छ बर्षकि छोरिका आमा बाबुले अमित अर्याल र अरुणिमाले बिवाह गरेको १२ बर्ष पछि अमेरिकामा सम्बन्ध बिच्छेद गरेका हुन । अमेरिकि ग्रिन कार्ड लिएर नेपाल छोडेका दुइ बर्ष पनि नबित्दै यो जोडि के कारणले छुट्टियो भन्ने प्रष्ट हुन सकेको छैन।
एक खुट्टाले नाचेर सबैलाइ अचम्मित पार्ने नर्तकि निलम ढुंगानाले पनि यसै बर्ष डिभोर्स गरिन। मनोज गजुरेलको डिभोर्सको कारण खोतलेर एक लेख समेत लेखेकि निलमले, सोहि घटनाबाट प्रेरणालिएर डिभोर्स गरेको चर्चा पनि चलेको थियो ।
Re: बर्ष २०७४ फर्केर हेर्दा - १० बिवाह, ५ डिभोर्स, नयाँ हिरोइनहरु (भिडियो)
« Reply #1 on: April 11, 2018, 11:11:15 AM »
« Reply #2 on: April 11, 2018, 11:11:55 AM »
वर्ष २०७४ नेपाली सिनेमाका लागि शुभ रह्यो । यो वर्ष राम्रा नेपाली फिल्म रिलिज भएको र नेपालि सिनेमाले विदेशी सिनेमालाइ भन्दा राम्रो ब्यापार गरेर नेपालि बजारलाई फराकिलो बनाउँन थालेको संकेत मिलेको छ ।
यो वर्ष केही नयाँ कलाकारहरु पनि भित्रिएका छन ।
यो बर्षको अन्तिम डेब्यु हुनेचि अभिनेत्री जसिता गुरुङ । उनको अभिनय रहेको सिनेमा ‘लिलिबिली’ यहि वर्षको अन्त्यमा नयाँ वर्ष २०७५ लाइ लक्षित गरेर प्रदर्शन शुरु हुंदै छ । जसिता सफल होलिन नहोलिन अर्को बर्श मात्र थाह होला तर, यो बर्श डेब्यु गर्ने अरु अभिनेत्रिहरुको शुरुवात कस्तो रह्यो चर्चा गरौं :
-- (भिडियो आउँदै छ)
« Reply #3 on: April 11, 2018, 12:34:51 PM »
२०७४ का चर्चित स्क्यान्डलः साम्राज्ञीको ट्याटुदेखि प्रियंकाको किससम्म
हाम्रो चलचित्र उद्योग सानो भए पनि स्क्यान्डलको धनी छ । नाम होस, बदनाम होस गुमनाम नहोस भन्ने प्रवृत्तिका कलाकारहरु धरै छन् यहाँ । उनीहरुले पेज ३ रिपोर्टरहरुलाई गसीपको कुनै कमि हुन दिँदैनन् । एकाध कलाकारहरु मात्र छन्, जो आफूलाई स्क्यान्डलबाट टाढा राख्न चाहन्छन्, स्वस्थ कर्ममा विश्वास गर्छन् ।
वर्ष २०७४ को कुरा गर्दा पनि स्क्यान्डलहरुको कुनै कमि रहेन । यस्ता स्क्यान्डलबाट कतिले फाइदा लिए भने कतिलाई नोक्सानी भयो । हामी यहाँ पुनःस्मरण गदैछौं सर्वाधिक चर्चा भएका ८ स्क्यान्डलहरुः
१. चार लाइन गीतको मूल्य ११ लाख
यो वर्ष सबैभन्दा चर्को रुपमा लिएको स्क्यान्डल हो, फिल्म ‘कृ’ मा गीत चोरीसम्वन्धि । यसको भर्खरै मात्र पटाक्षेप भएको छ । सगीतकार अल्मोडाले चार लाइन गीत चोर्दा फिल्मका निर्माता सुवास गिरी एक राज जेल मात्र बसेनन्, ११ लाख क्षतिपूर्ति तिर्न पनि बाध्य भए । यो घटना एउटा दृष्टान्तको रुपमा रहने छ ।
‘कृ’ फिल्ममा रहेको ‘उकालीमा अघिअघि’ बोलको गीतका चार लाइन ३० वर्षअघि बनेको सम्झना फिल्म्को गीतबाट सापटी लिइएको थियो । तर बिना अनुमति । सम्झनाका निर्माता तथा निर्देशक शम्भू प्रधानले कृका निर्माता गिरीलाई कपिराइटमा ताने । उनले फिल्मको कमाईको आधा हिस्सा क्षतिपूर्ति माग गर्दै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजुरी दिए । परिसरले गिरीलाई हिरासतमा लियो र एक रात थुन्यो । भोलीपल्ट शम्भु प्रधानलाई गिरीले ११ लाख क्षतिपूर्ति दिने र यूट्यूवबाट गीत हटाउने शर्तसहित मिलापत्र भयो ।
यो घटनामा कृका अर्का निर्माता भुवन केसी उम्किए भने संगीतकार अल्मोडाले पनि उन्मुक्ति पाए । गिरी एक्लैले सजाय भोगे । जबकि गीत चोरिएको थियो, भुवन केसी र अल्मोडाको सल्लाहमा ।
२. ऋचा शर्मा भर्सेस छक्का पञ्जा
नेपाली चलचित्रकी प्रतिभावान अभिनेत्री ऋचा शर्मा एउटा मन्तव्यमा बहस छेडिन् । त्यस क्रममा उनले छक्का पञ्जा फिल्ममा महिला हिंसालाई बढावा दिइएको प्रसंग उप्काएकी थिइन् । तर उनलाई अरिंगलको गोलोमा हात हालेझैं भयो ।
छक्का पञ्जा फिल्ममा नायिका पि्रयंका काकीसँग विवाहका लागि दीपकराज गिरीले अनौठो शर्त राखेका हुन्छन्, दुलहीर्लाइ दैनिक एक चड्कन लगाउन पाउनुपर्ने । जसलाई पि्रयंकाले स्वीकार गर्छिन् । यस्तो वाहियात दृष्यमा दर्शकहरु हाँसेकोमा आफूलाई अचम्भित भएको उल्लेख गर्दै रिचाले भनेकी थिइन्, ‘हामी नेपाली फिल्मका दर्शकहरु हिपोक्र्याट (आडम्बरी) छौं । बोलीमा महिला अधिकारका कुरा गर्छौं र व्यवहारमा नारीमाथि शोषण हुँदा हास्छौं ।’
यही अभिव्यक्तिका आधारमा छक्का पञ्जाकी निर्देशक दिपाश्री निरौला ‘ऋचाले नेपाली फिल्मका दर्शकहरुलाई मुर्ख भनेको’ भन्दै खनिइन् । उनले स्टाटस लेखिन्, ‘एक जना नायिकाले हाम्रो चलचित्र हेरेर ताली बजाउने दर्शकलाई मुर्ख भन्नुभएछ । पि्रय नायिकाज्यू दर्शकलाई मुर्ख भन्नुभएकाले नै तपाईंका फिल्मले कहिल्यै दर्शक पाएनन् । गेट वेल सुन ।’ यो स्टाटसलाई छक्कापञ्जा टिमका धेरै जनाले सेयर गरे ।
मिडियामा पनि यसले चर्को रुप लिएपछि ऋचाले फेसबुकमा लामो स्पष्टिकरण लेखिन् । उनले आफूले दर्शकलाई मुर्ख नभनेको बताउँदै महिला हिंसालाई फिल्मले प्रबर्द्धन गर्नु हुँदैन भन्नेमा चाहिँ अडिक रहेको उल्लेख गरिन् । हुन पनि उनले बोलेको भिडियो हेर्दा मुर्ख शब्द उच्चरण नै गरेको पाइँदैन ।
३. छक्का पञ्जामा गीत चोरी
‘कृ’ भन्दा अगाडि गीत चोरीको अर्को प्रकरणले पनि उग्र रुप लिएको थियो । यो थियो फिल्म ‘छक्का पञ्जा २’ को गत नाइलनको साडीमा । यो गीत चोरीमा पनि उनै अल्मोडा राना उप्रेति संलग्न थिए ।
नाइलनको साडीमा बोलको गीत कान्छा मगर नेपालीको संकलन हो । त्यसमा केही परिमार्जन र थपथाप पार्दै फिल्मका निर्मातासमेत रहेका दीपकराज गिरीले अल्मोडासँग मिनलेर नयाँ गीत रेकर्ड गराए । यो गीत यूट्यूवमा आउनासाथ हिट भयो र विवाद पनि सुरु भयो ।
कान्छा मगर नेपालीका नाति प्रसिद्ध सारंगीवादक र प्रशिक्षक श्याम नेपालीले आफ्ना हजुरबाले गाएको गीत यसरी चोरी भएको भन्दै आपत्ति जनाए । यही गीत श्यामका छोरा तथा कान्छाका पनाती पि्रन्सले गाउने तयारी भइरहेको रहेछ । यही बीचमा छक्का पञ्जाको गीत सार्वजनिक भएपछि उनीहरु आश्चर्यमा परेका थिए । यसमा दीपकराज गिरीले अल्मोडामाथि दोष खन्याएका थिए । अल्मोडाले गीतको वास्तविक सर्जकबारे आफूलाई जानकारी नदिइकन बदमासी गरेको उनको आरोप थियो ।
यो विवाद प्रहरीमा भने पुगेन । यूट्यूवमा गीतको संगीतकारमा पि्रन्स नेपाली र कान्छा मगर नेपालीको नाम पछि थपिएको थियो ।
४. प्रियंका कार्की र आयूष्मानको खुल्ला चुम्बन
पि्रयंका कार्की र आयूष्मान देशराजबीचको प्रेम यो वर्षभरी मिडियामा गसिपको विषय बनिरह्यो । विषय नभएको बेलामा उनीहरुले नै विषय दिए ।
डिभोर्सी नायिका हुन् प्रियंका । उनको रोचक मैनालीसँग उनको वैवाहिक सम्वन्ध छोटो समयमा टुटेको थियो । त्यसपछि उनीलामो समय सिंगल रहिन् । र, हालै उनी आफूभन्दा निकै कान्छा आयूष्मानसँग प्रेममा परेकी छिन् । यो जोडीको प्रेम सडकमै छताछुल्ल देख्न थालिएको छ ।
केही समयअघि एउटा अवार्ड समारोहमा उनीहरुले खुल्लमखुल्ला चुम्बन गरेर स्क्यान्डल मच्चाउन खोजे । प्रियंकाले अवार्ड लिएर फर्किँदा आयूश्मानले उनलाई जुरुक्कै बोकेर ओठमा चुम्बन गठरेका थिए । प्रियंकाले पनि उनलाई साथ दिएकी थिइन् । यो दृष्य केजातिलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भने झैं भएको थियो ।
यो जोडी अहिले पनि भर्खरका टिनएजर्स जसरी जहिँतहीँ आफ्नो प्रेम प्रदर्शन गर्दै हिँडिरहेको छ । केही दिनअघि प्रियंकाको जन्मदिनमा आयूष्माले उनलाई बग्गीमा शहर घुमाएर अर्को नाटक प्रदर्शन गरे । उनीहरु चंगाचेट फिल्ममा सँगै अभिनय गर्दैछन् । अब सायद उनीहरुको प्रेम झनै झांगिएर प्रदर्शन हुने छ ।
५. पत्रकार सम्मेलनमा अंगरक्षकका साथ प्रदिप
नेपालमा पहिलोपटक बडिगार्ड सहित देखिएका नायक अनमोल केसी हुन् । उनी डि्रम्स फिल्म रिलिज हुँदा केही बडिगार्ड लिएर हलहरुमा पुगेका थिए । एउटा सुपरस्टार भएको नाताले हलहरुमा दर्शकको भिडभाडबाट जोगिनका लागि बडिगार्ड लैजानुलाई अस्वभाविक रुपमा लिइएन् ।
तर, यसैको सिको गर्न खोज्दा चिप्लिन पुगे नायक प्रदिप खड्का । नेपाली फिल्म इन्डष्ट्रीमा अनमोलको हाराहारीमा नभए पनि उनको स्टारडम राम्रै छन् । उनले थोरै फिल्मबाट धेरै फ्यान कमाएका छन् । तर, गलत ठाउँमा आफ्नो स्टारडम देखाउन खोज्दा उनी ट्रोलको शिकार भए ।
सन्दर्भ थियो, चलचित्र ‘लिलिबिली’ को घोषणा कार्यक्रम । कार्यक्रममा सो फिल्मको टिम र पत्रकार बाहेक कोही पनि थिएनन् । तर, प्रदिपले कोबाट असुरक्षा महसुस गरे कुन्नी चार जना काला भुस्तिघ्रे बडिगार्ड लिएर कार्यक्रममा इन्ट्री गरे ।
सुरुमा चलचित्रका दुई नवनायिकाहरु जसिता गुरुङ र रेविका गुरुङ २-२ जना बडिगार्डको साथमा स्टेजमा चढेका थिए । त्यसपछि नायक प्रदिप खड्का ४ जना बडिगार्ड लिएर आए । यो दृष्य देखेर पत्रकारहरु मुखामुख गरेका थिए । बडीगार्ड ल्याउनुको कारणबारे पत्रकारले प्रश्न गर्दा फिल्मका निर्देशक मिलन चाम्र्सले बलिउडका कलाकारले बडिगार्ड लिएर हिँड्छन् भने नेपाली स्टारहरुले किन हुँदैन ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।
तर त्यसपछिका दिनमा भने प्रदिप कहिल्यै बडिगार्डसहित देखिएका छैनन् ।
६. विकिनी गर्लसँग विनयको इन्ट्री
चलचित्रको प्रवर्द्धनका लागि निर्माता-निर्देशकहरु नयाँ-नयाँ जुक्ति लगाउन खोज्छन् । फरक फरक प्रयोग गर्न खोज्छन् । तर, यसो गर्दा कहिलेकाहीँ बुमर्‍याङ पनि खान पुग्छन् । ‘रोमियो एन्ड मुना’ फिल्मका निर्माता तथा अभिनेता विनय श्रेष्ठको यही हाल भयो । बढि सिर्जनशिल हुन खोज्दा उनी जोकको पात्र बने ।
घटना केही महिना अगाडिको हो । ‘रोमियो एन्ड मुना’ को एउटा रोमान्टिक गीत रिलिज कार्यक्रममा पुगेका पत्रकार र चलचित्रकर्मी त्यतिबेला जिल्ला परे, जब चलचित्रका मुख्य नायक विनयको इन्ट्री भयो । उनी विकिनी पहिरनमा रहेका २ युवतीसँग लठारिँदै कार्यक्रम हलमा प्रवेश गरेका थिए । त्यो देख्दा पत्रकारदेखि फिल्मकर्मीहरुसम्म एकअर्कालाई हेराहेर गरिरहे ।
चलचित्रमा समावेश ‘स्यान्डवीच’ बोलको गीत सार्वजनिक कार्यक्रम थियो त्यो । खासमा अमेरिकामा खिचिएको उक्त गीतमा अमेरिकी युवतीहरुलाई विकिनीमा प्रस्तुत गरिएको रहेछ । त्यसैलाई लिएर विनयले यो फन्डा अपनाएका रहेछन् ।
म्यूजिक बजेसँगै विकिनी गर्लहरुसँगै विनयको इन्ट्री भएको थियो । उनले केही समय ती यूवतीसँग नाच पनि देखाए । तर, यो हर्कतले उनर्लाइ केही फाइदा भएन । उनको यो शैलीको प्रशंसा हुनुको साटो खिल्ली उडाइयो ।
७. साम्राज्ञीको वक्षस्थलमा ट्याटु
अहिलेका युवायुवतीहरुको ट्याटु खोपाउने व्यापक ट्रेन्ड छ । त्यसैले नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले ट्याटु खोपाउनु नौलो कुरा थिएन । उनले आफ्नो गोप्य अंग वक्षस्थलमा ट्याटु खोप्न चाहिन् । त्यो पनि उनको निजी कुरा भयो ।
तर, विवाद त्यतिबेला आयो, जब उनको वक्षस्थलको ट्याटु सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट भयो । यही कारणले उनको प्रेमीमयंका खड्कासँग सम्वन्ध चिसिएको चर्चा पनि चल्यो । पछि त्यो ट्याटु खिच्ने विदेशी कलाकारले आफूले फोटो लिक गरिदिएको भन्दै माफी मागे । साम्रज्ञीले पनि आफ्नो अनुमतिबिना फोटो सार्वजनिक भएको दावी गरेकी छिन् । उनले यो प्रकरणले ठूलो रुप लिनुमा पत्रकारहरुमाथि दोष थोपरेकी छिन् ।
तर,साम्रज्ञीले स्क्यान्डल मच्चाउनकै लागि यो तस्वीर सार्वजनिक गरेको र विवादमा परेपछि कलाकारलाई अघि सारेको आशंका गरिएको छ ।
७. शंकर विसीको गालीगलौज
यही महिना म्युजिक भिडियो निर्देशक शंकर विसी विवादमा परे । भृकुटीमन्डपमा राष्ट्रिय दोहोरी गीत प्रतियोगिता उद्घाटनको दिनको घटना हो । उनले एक यूट्यूवकर्मीलाई पिट्ने धम्की दिए ।
ती यूट्यूवकर्मीले एक गायकको अन्तरवार्ता लिइरहेको बेलामा शंकर क्यामराको बीचबाट हिडिदिएका थिए । त्यसपछि क्याराम्यानले आफूलाई घुरेर हेरेको उनको आरोप छ । ‘घुरेर हेर्ने तेरो हैसियत हो ?’ भन्दै उनले थर्काए, ‘राम्रो पिटाई भेट्लास नी ।’
उनले यसरी थर्काएको भिडियो तुरुन्तै यूट्यूवकर्मीले यूट्यूवमा पोष्ट गरिदिए, जुन चाँडै भाइरल भयो । यूट्यूव लगायत सामाजिक सञ्जालमा शंकरमाथि गाली वषिर्न थाल्यो । कतिपयले उनको जातलाई उछालेर पनि गाली गरे । यसबाट शंकर क्षुब्द भए । केही दिनअघि उनले आफूलाई गाली गर्नेहरुको स्किनसट नै बोलेकर प्रहरीमा पुगेका छन् । उनले आफूमाथि जातीय आधारमा गाली गर्नेहरुलाई साइबर क्राइममा उजुरी गरेका छन् । उनले उजुरी गरेकाहरुमध्ये २ जना नेपालभित्र र ४ जना नेपाल बाहिर रहेछन् । प्रहरीले यस घटनामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
९. आस्था राउत र ज्योती मगरको ‘दोहोरी’
हालै दुई गायिकाहरुबीच फेसबुकमा दोहोरी चल्यो । सन्दर्भ थियो, महोत्सवहरुमा केही गायिकाले प्रदर्शन गर्दै आएको अश्लिलता ।
आस्थाले आफ्नो फेसबुकबाट महोत्सवमा अश्लिलता फैलाउनेहरुविरुद्ध आवाज उठाएकी थिइन् । यसले घोच्न पुग्यो गायिका ज्योती मगलाई, जो अश्लिलताकी रानी मानिन्छिन् । उनले फेसबुकबाटै आस्थालाई लामो जवाफ दिइन् । त्यसपछि उनीहरुबीच दोहोरी चलिरह्यो ।
यसमा जनसमर्थन भने आस्थाको पक्षमा रह्यो । उनले वास्तवमै गम्भीर मुद्दा उठाएकी थिइन् । पछिल्लो समय महोत्सवमा राम्रो गाउने भन्दा अंग देखाउनेहरु बढि बिकिरहेको उनको चिन्ता थियो । केही समयअघि मात्रै नग्नता प्रदर्शन गर्दा कोहलपुर महोत्सवबाट गायिका सरस्वती लामा लखेटिनु परेको थियो । हालै मात्र केही जिल्लाबाट ज्योती मगर र सरस्वती लामाजस्ता गायिकाहरुलाई महोत्सवमा प्रतिवन्ध लगाइएको खबर आएको छ ।
१०. नीति शाहको बयान
मिस नेपालकी सेकेन्ड रनरअप निती शाह पनि विवादमा आइन् । विवादमा आउनुको कारण थियो, उनले जापानमा पुगेर दिएको एउटा अभिव्यक्ति ।
जापानमा भएको मिस इन्टरनेसनलमा विभिन्न देशबाट आएका सुन्दरीहरुलाई महिला शिक्षाको सम्वन्धमा आफ्नो भनाई राख्न भनिएको थियो । त्यसैले नीतिले आफ्नो उत्तरमा उनले नेपालमा दुई समुहका महिला रहेको भनेर विभाजन गरेकी थिइन् । आफ्नो मन्तव्यका क्रममा उनले गाउँमा रहेका अशिक्षित महिलाहरु विभिन्न देशमा वेश्यावृत्तीका लागि विक्री हुने गरेको बताइन् ।
विदेशमा गएर नेपालको विषयमा नकारात्मक प्रचार गरेको भनेर उनको तीव्र आलोचना भयो । नितीले भनेका कुरा बेठिक त थिएन, तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको बारेमा नकारात्मक छवि निर्माण हुने गरी अभिव्यक्ति नदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने धेरैको भनाई रह्यो । अनि कतिपयले चाहिँ उनलाई राम्ररी अंग्रेजी बोल्न नआएको भनेर पनि टिप्पणी गरे ।
यसअघि मिस नेपाल प्रतियोगितामा निती धेरैकी फेभरेट थिइन् । तर, उपाधि भने निकिता चन्दको पोल्टामा परेको थियो ।
« Reply #4 on: April 11, 2018, 12:38:08 PM »
वर्षका ८ फ्लप स्टार: जो बक्स अफिसमा पछारिए
२०७४ साल हामीबाट बिदा हुने क्रममा छ । आउँदो शनिबार नेपालीहरुले नयाँ बर्षलाई स्वागत गर्नेछन् । यो बर्षलाई बिदाई गर्नै लाग्दा हामी नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि वर्ष २०७४ कस्तो रह्यो भनेर समिक्षा सुरु गर्दैछौं ।
पहिलो श्रृंखलामा हामी चर्चा गर्दैछौं, चलचित्र क्षेत्रमा ठूलो नाम हुनुका बाबजुद यो वर्ष असफल हुन पुगेका स्टारहरुको । यो बर्ष नेपाली चलचित्रहरु कमै चले । धेरै चलचित्र असफल हुँदा नाम चलेका कलाकार पनि फ्लपको भिडमा मिसिएका छन् । साथै पुराना पुस्ताका कलाकारलाई नयाँ पुस्ताकाले चुनौति दिन थालेका छन् ।
यहाँ हामीले यो सुचीमा यस वर्षका ८ फ्लप स्टारहरुलाई प्रस्तुत गरेका छौं, जसका चलचित्र दर्शकले हेरिदिएनन्ः
कुनै समय सिंगो चलचित्र नै बोक्ने क्षमता राख्दै आएकी नायिका रेखा थापा पछिल्लो समय ओझेल पर्दै आएकी छिन् । यो वर्ष त उनका लागि झनै बिर्सनलायक रह्यो ।
विगतमा रेखाले खेलेका बाहिरी ब्यानरका चलचित्र असफल भए पनि आफैले निर्माण गरेका चलचित्र राम्रै चल्ने गर्दथे । तर, यो बर्ष उनी आफ्नै ब्यानरमा पनि चलिनन् । रेखाले अभिनय गरेका ‘डायरी’ र ‘रुद्रपि्रया’ यो बर्ष रिलिज भए । तर, यी दुबै चलचित्रले पानी माग्न भ्याएनन् । रेखाको स्टारडम छ भनेर करोडौ लगानी गर्ने निर्माता डुबे ।
यो बाहेक रेखाको यो बर्ष मिडियामा खासै चर्चा पनि भएन । बरु, राजनीतिमा पेन्डुलम बनेर उनी आक्कलझुक्कल चर्चामा रहिन् । अहिले रेखालाई कुनै फिल्मको अफर छैन । बरु आफैले अर्को फिल्म निर्माणको कुरा गरिरहेकी छिन् ।
नेपाली चलचित्रमा ‘एक्सङ किङ’ को रुपमा चिनिएका निखिल उप्रेतिको नामै काफी हुन्थ्यो कुनै बला फिल्म चल्छ । तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ ।
यो बर्ष निखिलका ४ चलचित्र रिलिज भए, तर चारैवटाले पैसा कमाउन सकेनन् । उनले, आफै निर्माण गरेको चलचित्र ‘रुद्र’ बक्स अफिसमा पछारियो । राजनीतिक बिषयवस्तु उठान गरिएको चलचित्र ‘संरक्षण’ र एक्सनप्रधान ‘पिजडा ब्याक अगेन’ असफल बने । अर्को चलचित्र ‘राधे’को व्यापार पनि अपेक्षित रहेन । यी चलचित्रबाट न त निखिलको अभिनयको चर्चा भयो न त एक्सनको । बक्स अफिसमा यी चलचित्र निरिह बने ।
निखिल यो बर्ष नै चलचित्र ‘कमिटमेन्ट सिक्स्टी आवर’ निदेृशन गर्न तम्सिए । तर, विभिन्न लफडाका कारण यो चलचित्रको छायांकन पुरा हुन सकेको छैन ।
चकलेटी नायक आर्यन सिग्देलका लागि पनि पछिल्लो केहि बर्षयता नेपाली चलचित्र फाप्न सकेको छैन । आर्यनको स्टारडम निरन्तर ओरालो लाग्दा यो बर्ष उनी नायिका रेखा थापाको साथमा हिट चलचित्र खोज्न अगाडि आए । रेखा र आर्यनले ८ बर्ष लामो दुश्मनीलाई मित्रतामा मात्र बदलेनन्, चलचित्रमा पनि साथै काम गरे । तर, चलचित्र ‘रुद्रपि्रया’ पूर्णरुपमा असफल भयो ।
यो चलचित्र असफल हुँदा आर्यनको स्टारडम सकिन लागेको चर्चा भयो । चलचित्र असफल भएपछि आर्यन आफै चलचित्र ‘कायरा’ निर्माणमा तम्सिएका छन् । यो चलचित्रमा उनले नायिका साम्रज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहलाई १० लाख पारिश्रमिकमा अनुवन्ध गरेको विषयले चर्चा पाएको थियो ।
नेपाली चलचित्रमा पछिल्लो समय अत्यधिक चर्चा हुने अभिनेता हुन् विपिन कार्की । प्रत्येक फिल्ममा फरक खालको अभिनय र प्रस्तुतिका कारण उनलाई उम्दा कलाकारको रुपमा लिइन्छ । गत वर्ष उनले अभिनय गरेको फिल्म जात्रा सुपर हिट भएको थियो ।
‘जात्रा’का कारण हाइहाइ भएका कमाएका अभिनेता यो बर्ष भने व्यापारिकरुपमा चिप्लिए । विपिनको अभिनयको उत्कृष्टता कायमै रहे पनि उनका फिल्मले दर्शकलाई हलसम्म तान्न सकेनन् । यो बर्ष विपिनलाई नै मुख्य भूमिकामा लिएर चलचित्र ‘नाका’ र ‘लालपूर्जा’ रिलिज भए । तर, दुबै चलचित्र बक्स अफिसमा नराम्रोसँग पछारिए । मल्टि प्लेक्समा उनको नामले दर्शकहरु तानिने स्थिति भए पनि सिंगल हलका दर्शकहरुमा उनको स्टारडम अझै बन्न सकेको छैन ।
थुप्रै स्मरणीय चलचित्रहरुमा अभिनय गरेकी नायिका ऋचा शर्मा यो बर्ष भने असफल नायिकाको सूचीमा परेकी छिन् । उनले, अभिनय गरेको चलचित्र ‘आधा लभ’ यो बर्ष रिलिज भयो । यो चलचित्रमा नर्मात्री पनि उनी आफै थिइन् । तर, चलचित्र नराम्रोसँग चिप्लियो ।
यस्तै, उनी चलचित्र ‘फिर्के’मा विशेष भूमिकामा देखिइन् । ऋचालाई देखाएर हलमा दर्शक तान्ने सोच बोकेका निर्माता सुलेमान शंकर पनि निराश बने । ऋचा शर्माको अभिनयको तारिफ हुनेगर्छ । तर, उनी हलमा दर्शक तान्न नसक्ने नायिकाको रुपमा चित्रित छिन् । बरु, यो बर्ष नै उनले अष्ट्रेलिया पुगेर चलचित्र ‘सुनकेशरी’ निर्माण गरेकी छिन्, जुन अर्को वर्ष रिलिज हुँदैछ । साथै कोहलपुर एक्सप्रेसको ट्रेलरबाट पनि उनले चर्चा पाइरहेकी छिन् ।
थोरै तर, स्तरीय फिल्म खेल्न रुचाउने अभिनेता हुन् खगेन्द्र लामिछाने । उनको चलचित्र भन्ने वित्तिकै दर्शकमा एउटा आशा हुन्छ । तर, प्रत्येक चलचित्रमा उनको एउटै शैलीले गर्दा दर्शक निराश बन्दै गइरहेका छन् ।
यो बर्ष कलाकार खगेन्द्र अभिनित एउटा मात्र चलचित्र ‘धनपति’ रिलिज भयो । प्रदर्शन अघिसम्म यो चलचित्रले ठूलो हाइप बनाएका थियो । तर, पशुपति प्रसाद र टलकजंग भर्सेस टुल्के जस्ता चलचित्र हेरेर धनपतिमा तानिएका दर्शकहरु निराश बने । चलचित्रले समिक्षा मिश्रति पायो भने व्यापार कमजोर गर्‍यो । यो खगेन्द्रका लागि ठूलो धक्का हो । उनी अब ‘डमरुको डण्डीबियो’ लिएर चाँडै दर्शकमाझ आउँदैछन् । यो फिल्मको ट्रेलरले भने राम्रो प्रशंसा बटुलिरहेको छ ।
नायिका नम्रता श्रेष्ठको स्टारडम पनि खस्किएको छ । ‘छड्के’, ‘मौन’, ‘क्लासिक’ जस्ता थुप्रै चलचित्रमा दमदार अभिनय गरेर तारिफ कमाएकी नम्रता यो वर्ष असफल रहिन् । गत वर्ष आयोजना भएको सम्पूर्ण अवार्डमा आफ्नो अभिनयका कारण एकलौटी बर्चस्व कायम गरेकी नम्रता यो बर्ष चलचित्र ‘पर्व’ मार्फत दर्शकमाझ आइन् । यो चलचित्रले बक्स अफिसमा खासै कमाई गरेन । साथमा, नम्रताको अभिनयको पनि त्यती साह्रो चर्चा भएन । चलचित्र नचलेपछि मिडिया र दर्शकबाट हराएकी नम्रता बर्षभरि नै ओझेलमा रहिन् ।
यो बर्ष असफल बनेका कलाकारले अर्को बर्ष अझ मिहिनेतका साथ काम गर्न आवश्यक छ । किनकी, चलचित्र क्षेत्रमा पुस्ता हस्तान्तरण निकै चाडो भैरहेको छ ।
नायिका वर्षा शिवाकोटीका लागि पनि यो बर्ष सुखद बनेन । यो बर्ष उनले अभिनय गरेको चलचित्र ‘कारखाना’ रिलिज भयो, जुन बक्स अफिसमा नराम्रोसँग पिटियो । यो चलचित्रको प्रचारका लागि नायिका शिवाकोटीले खुबै दौडधुप गरेपनि काम लागेन ।
यो बाहेक उनका अन्य कुनै पनि चलचित्र रिलिज भएनन् । उनले यो बर्ष चलचित्र ‘रानी महल’का लागि लामै समय कुरिन्, तर चलचित्र घोषणा भएपछि छाडिन् । चलचित्र क्षेत्रमा उनले अझै पनि आफ्नै स्टारडम बनाउन सकेकी छैनन् ।